केवल एपलाई तपाईंले मनोरञ्जनको संसारमा डुबाउन आवश्यक छ।
Android को लागि एक शक्तिशाली यूट्यूब डाउनलोडर र धेरै र अधिक।
Videoderले के गर्न सक्छन्?
50 भन्दा माथि + साइटहरूबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
भिडियोडाइरले हाल तपाईंलाई यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ह्यास्टस्टार, भोट, वीके जस्ता साइटहरू बाट भिडीयोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको अनुरोध अनुसार प्रत्येक हप्ता थप हप्ता थपिन्छन्।
4K भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
किनकि यो राम्रो चीजहरू स्पष्ट गर्न हेर्न। भिडियोको साथ 4K भिडियो स्ट्रीम वा डाउनलोड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई अल्ट्रा एचडी यन्त्रहरूमा प्ले गर्नुहोस्।
4K भिडियो डाउनलोडरको बारेमा थप जान्नुहोस्
Batch डाउनलोड गर्दै।
अन्वेषण गर्दाखेरी नै भिडियाे तथा गीतहरूकाे सूची बनाउनुहाेस र एकैपटकमा डाउनलाेड गर्नुहाेस । याे बहू–डाउनलाेड विशेषताकाे शक्ति हाे । अब सयाैँ गीतहरू एउटै थिचार्इमै डाउनलाेड गर्नुहाेस ।
छिटो डाउनलोड गर्दै 10X सम्म।
डाउनलोड गति को गति को लागि भिडियो संपादक ले धेरै नेटवर्क कनेक्शन को उपयोग गर्दछ। तपाईंले अधिकतम गति प्राप्त गर्न तपाईंको सञ्जाल गुणस्तर अनुसार जडानको संख्या सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
आवरण कला र अडियो ट्याग सम्पादक ।
तपाईंको सम्पूर्ण संगीत लाइब्रेरी व्यवस्थित गर्नुहोस्। आवरण कला सेट गर्नुहोस्, एमपी3ट्यागहरू थप्नुहोस् र तपाईंको संगीत संग्रहमा एक जीवन दिनुहोस्।
स्मार्ट link detection उपकरण।
Videoder मा सबैभन्दा उत्कृष्ट विशेषताहरू हाम्रो स्मार्ट लिंक अन्वेषण उपकरण हुन्। जब तपाइँ कुनै पनि भिडीयोको लिंक प्रतिलिपि गर्नुहुन्छ, संगीत वा मिडिया फाइल भिडकोडर लिङ्क पत्ता लगाउँदछ र डाउनलोड गर्न पपअप देखाउँछ।
तपाईंको छनोट अनुसार भिडीयोडर अनुकूलन गर्नुहोस्। कुनै पूर्व निर्धारित विषयवस्तु प्रयोग गर्नुहोस् वा प्यालेटबाट रङ रोज्नुहोस्। भिडियोवोडर आफैले बनाउनुहोस्।
एक बाहिरीमा Youtube प्लेसूचीहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
भिडियोको साथ तपाईं एकल ट्यापको साथ YouTube प्लेसूचीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ सबै भिडियोहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं तान्नु सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहानुहुन्छ चयन गर्नुहोस् र एक पटकमा तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोस्।
YouTube प्लेसूचीहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
विज्ञापन अवरोधकसँग ब्राउजर इन्भल्ट गर्नुहोस्।
एप ब्राउजरले यसलाई विभिन्न साइटहरूबाट भिडीयो डाउनलोड गर्न सजिलो बनाउँछ, किनभने यसले भिडियो वा मिडिया फाइल पत्ता लगाउँछ र तपाईंलाई डाउनलोड पपअप देखाउँछ। यसले तपाईंलाई बाधा बिना वेब ब्राउज गर्न मद्दत गर्दछ।
द्रुत डाउनलोड उपकरण।
तपाईंको समय बचत गर्दछ। तपाईँले डाउनलोड गर्नु भएको एक धेरै सजिलो उपकरण तर तपाईं रश मा हुनुहुन्छ। लिंकहरू लोड गर्न थप पर्खदैन। केवल दुई सरल चरणहरू र डाउनलोड सम्पन्न हुन्छ।
किनभने हामी तपाईंको हेरचाह गर्छौं। रात मोडले तपाईंलाई रातको अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। अमूल्य पर्दाहरूको लागि रातो मोड सुपर सिफारिश गरिएको छ।